0 Monday November 05, 2018 - 10:14:27
0 Monday November 05, 2018 - 07:54:05
0 Sunday November 04, 2018 - 13:06:43
Khilaafkii mudada soo jiitamayay ee u dhaxeeyay DF, Madax-Goboleedyada iyo Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa hadda gaaray meeshii ugu sarreysay waxaana lagu qiyaasi karayaa Webi karkaarradii jabsaday oo saameyntiisa leh.
Qarax Askar Bangaraaf ah Lagu Dilay oo Markale ka dhacay Duleedka Balidoogle.
0 Sunday November 04, 2018 - 13:03:43
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in weerar khasaara dhimasho iyo dhaawac ah dhaliyay markale lala beegsaday ciidamo Bangaraaf ah.
Sarkaal American Ah Oo lagu Dilay Toogasho Ka Dhacday Magaalada Kaabul.
0 Sunday November 04, 2018 - 12:50:04
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar hubeysan oo ka dhacay mid kamida saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin magaalada Kaabuul ee caasimadda wadanka Afghanistan.
Musuq Maasuq iyo Wax isdabamarin ka dhax dilaacay Wasaaradda Maaliyadda DF.
0 Sunday November 04, 2018 - 12:25:19
Ismariwaa ayaa soo kala dhaxgalay laamaha maaliyadda dowladda Federaalka ayaa cirka iskusii shareeraya xilli musuq maasuq uu hareeyay wasaaradda maaliyadda.
0 Sunday November 04, 2018 - 11:00:14
Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa ka tacziyaysay dilka Sheekh Samiicul Xaq oo kamid ahaa culimaa'udiinka ugu caansan wadanka Pakistan.
0 Saturday November 03, 2018 - 19:55:07
Weeraro isugu jiray dhabbagallo iyo qaraxyo ayaa ciidamo katirsan AMISOM iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya lagula beegsaday Gobollada Jubbada Hoose iyo Sh/Hoose.
0 Saturday November 03, 2018 - 19:26:14
Wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in wasaaradda difaaca wadankaasi ay kumaanaan ciidamo ah u dirtay xuduuda uu mareykanku la wadaago wadanka Mexico si ay uga hor tagaan Kolonyo dad tahriibayaal ah oo kusoo wajahaan xuduuda koofureed ee mareykanka, kuwaas oo kakala yimid wadamada Selvador,…
Al Shabaab Oo Sheegtay in 5 askari ay ku dishay Qarax Ka dhacay deegaanka Weydoow Ee Duleedka Muqdisho.
0 Saturday November 03, 2018 - 19:22:14
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qarax aad u xooggan oo maanta gelinkii dambe ka dhacay deegaan dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
0 Saturday November 03, 2018 - 11:40:44
0 Saturday November 03, 2018 - 11:24:11
Kenya oo kumanaan askari ay ka joogaan qaar kamid ah gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in todobo sano kadib ay weli xaqiijin ahdaaftii ay ugu duushay dalka Soomaaliya oo ay ku sheegtay iney ahayd in amaanka dalka Kenya la adkeeyo.
Maamulka 'Puntland' Oo Digniin Ujeediyay Musharraxiinta Garowe Ku Sugan.
0 Saturday November 03, 2018 - 11:11:17
Maamulka isku magacaabay Puntland ayaa bilaabay in uu cadaadis saaro musharrixiinta isku taagay xilka madaxtinimada maamulkaas ee lafilayo in ay la loolamaan Cabdi Wali Gaas.
0 Saturday November 03, 2018 - 10:50:25
Wararka ka imaanaya wadanka Pakistan ayaa sheegaya in dablay hubeysan ay dishay mid kamida culimaa'udiinka ugu caansan wadankaasi kaalin weyna ku lahaa baraarugga islaamiga ah ee mandiqadda.
0 Friday November 02, 2018 - 13:18:11
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo maanta oo kale ka baxa war-baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaana lagu soo qaataa mowduuc muhim ah.
Taliye Khaliif Max'med Tahliil iyo Askar ilaala u aheyd oo Lagu Dilay Qarax Ka Dhacay Waqooyiga Muqdisho.
0 Friday November 02, 2018 - 10:59:52
Ciidamo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay weerar aad u xooggan ku qaaday saldhig ay maleeshiyaadka dowladda Federaalka Soomaaliya uga sugnaayeen gudaha magaalada Muqdisho.
0 Thursday November 01, 2018 - 19:58:39
Diyaarad Gaadiid Nuuca Aan Xabaddu Karin Ka Dejisay Magaalada Garoowe iyo iska Hor'imaad ka Dhacay Boosaaso.
0 Thursday November 01, 2018 - 19:17:13
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in israsaaseyn xooggan ay ka dhacday maanta gelinkii dame saacado kadib markii ciidamada maamulka Puntland ay xabsiga dhigeen Nabadoon caan ah.
Al Shabaab Oo Ciidamo Ku Weerartay Koontaroolka Isbaarada Shabelle Ee Duleedka Muqdisho.
0 Thursday November 01, 2018 - 12:18:59
Xoogag aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa maanta barqadii weerar xooggan ku qaaday bar koontarool oo maleeshiyaadka dowladda Federaalka ku leeyihiin duleedka Muqdisho.
0 Thursday November 01, 2018 - 12:07:37
Wararka ka imaanayo wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in wabiga Hadson ee mara magaalada New York laga dhex helay meydadka laba gabdhood oo sucuudiyaan ah, kuwaas oo loo badaniyo in si kas ah loo dilay.
0 Thursday November 01, 2018 - 11:14:08
0 Thursday November 01, 2018 - 11:02:13
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa gaaray wafdi ka socday waxay loogu yeero Q.Midoobe iyo Ururka Midowga Afrika ee ciidamadiisu gummeysiga ku hayaan shacabka Soomaaliyeed.
Dilal Ka Dhacay Muqdisho iyo deegaanka Ceelasha Biyaha.
0 Wednesday October 31, 2018 - 19:43:31
Wararka ka imaanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in weerar hubeysan lagu dilay mid kamida ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Wednesday October 31, 2018 - 19:33:59
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaara badan dhaliyay oo maanta gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada Wanllaweyn ee gobolka Sh/Hoose.
0 Wednesday October 31, 2018 - 12:15:06
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay weerar ka dhacay galbeedka wadanka Afghanistan.
0 Wednesday October 31, 2018 - 12:12:06
Iska Hor'imaadyo xooggan ayaa markale ka dhacay deegaan hoos yimaad degmada Qoryooleey ee gobolka Shabeellaha Hoose.
0 Wednesday October 31, 2018 - 12:07:26
Wararka ka imaanaya gobolka Galguduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo katirsan Xabashida Itoobiya ay saldhigyo ka sameysteen deegaan ay maamulaan maleeshiyaadka Mushrikiinta ee Ahlusunna isku magacaabay.
0 Wednesday October 31, 2018 - 08:24:12
Mary Regev oo kamida golaha Wasiirada Yahuudda ayaa iyada iyo wafdi la socday si heer sare ah loogusoo dhoweeyay wadanka imaaraatka cabata.
Daawo Mu'asasada Al-malaaxim Oo Soo Saartay Filimka هدم الجاسوسية1.
0 Wednesday October 31, 2018 - 08:05:36
Mu'asasada Al-malaaxim ee garabka Warbaahineed ee Mujaahidiinta Al-qaacidah ee Faraca Dhulka Jaziirada Carabta ayaa soo saartay Filim cusub oo si weyn loo wada sugayay.
« Prev1 ... 45678910 ... 268Next »